Mogadishu Journal » 2018 » April » 14
Mjournal :-Diyaarad laga lahaa wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa ugu dambeyntii ka duushay magaalada Boosaaso kadib markii saacado ay ku xayirneyd garoonka. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradan ay ka qaaday magaalada Boosaaso macalimiin tababaraysay ciidamada...
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay ku xayireen garoonka diyaaradaha Boosaaso diyaarad laga leeyahay wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta. Diyaaradan ayaa loo diiday inay ka duusho garoonka diyaaadaha kadib markii...
Mjournal :-Iyadoo la guda galay labada todobaad ee la doonayo in lagu soo doorto xilka banaan ee Guddoomiyaha Golaha shacabka oo Khamiistii la soo dhaafay si rasmi ah uu isaga casilay Guddoomiye Jawaari ayaa waxaa soo if baxaya loolan ka dhex bilowday Xildhibaanadii ku mideysnaa...
Mjournal :Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku wajahan dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu uga qeyb galayo shir madaxeedka 29aad ee Jaamacadda Carabta. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay...
Mjournal :-Shir ku saabsan hanaanka dib u eegista Dastuurka ayaa maanta lagu waddaa in uu ka furmo Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland. Shirkaan oo socon doono muddo labo maalmood ah waxaa ka qeyb gali doono Mas’uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyadda...
Mjournal :-Qarax aad u weyn ayaa laga maqlay caasimadda Dimishiq ee dalka Suuriya Sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo. Dalalka Mareykanka, Fransiiska iyo Britain ayaa duqeymo ay kaga jawaabayaan sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay adeegsatay ka fuliyay gudaha wadanka...